Florian Neuhaus oo doonaya inuu ku biiro Liverpool xagaagan
Home Horyaalka Germalka Florian Neuhaus oo doonaya inuu ku biiro Liverpool xagaagan
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Borussia Monchengladbach ee Florian Neuhaus ayaa lagu soo waramayaa in uu si aad ah u doonayo in uu ku biiro kooxda Liverpool inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
23 jirkaan ayaa qandaraas kula jira naadigiisa Jarmalka ilaa June 2024 laakiin dhawaan ayuu diiday inuu meesha ka saaro inuu ka tagayo xagaagan iyadoo ay jiraan warar ku saabsan mustaqbalkiisa.
Warbixin la soo saaray ayaa lagu sheegeysa in Liverpool ay u aragtay ciyaaryahanka khadka dhexe bedelka mustaqbalka ee Georginio Wijnaldum , kaasoo si bilaash ah uga tagi kara Anfield dhamaadka bisha June.
Sida laga soo xigtay Bild , kooxda Jurgen Klopp ayaa daawanayay Neuhaus in muddo ah, ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaana xiiseynaya inuu ku biiro kooxda heysata Premier League suuqa kala iibsiga ee soo socda.
Ciyaaryahankii hore ee 1860 Munich ayaa dhaliyay lix gool, waxaana uu diiwaan geliyay lix caawin 31 kulan oo uu u saftay kooxda Monchengladbach intii lagu guda jiray ololihii 2020-21.
In kasta oo uu qandaraas kula jiray kooxda Marco Rose illaa xagaaga 2024, waxaa lagu soo waramayaa in qandaraaskiisa lagu burburin karo € 40m (£ 34.7m).
Previous articleWeeraryahankii hore ee Argentina Franco Jara oo sheegay inuu Messi dhunkan doono haduu yimaado MLS.
Next articlePSG oo ku dhow Saxiixa Qadka dhexe Liverpool Wijnaldum.